AKHRISO: AMISOM oo qirtay in ciidamada Itoobiya ay soo rideen diyaaraddii ku burburtay Bardaale – HalQaran.com
AKHRISO: AMISOM oo qirtay in ciidamada Itoobiya ay soo rideen diyaaraddii ku burburtay Bardaale
Burburka diyaaradda African Airways ee ku dhacday degmada Bardaale ee gobolka Baay.
Bardaale (Halqaran.com) – Taliska Ciidamada Midowga Afrika Amisom, qoraal ka soo baxay ayaa looga hadlay baaritaanada ku saabsan diyaarad Ciidamada Itoobiya ay ku soo rideen Degmada Bardaale ee Gobolka Baay.
Diyaaradan oo ay leedahay Shirkadda African Airways ayaa waxa ay aheyd nooca yar yar ee 30 ruux qaada, waxaana ay waday shixnad dawo aheyd, balse intii aysan ka dagan Garoonka Diyaaradaha Bardaale ayaa lagu dhuftay Qoriga Suuga, waxaana ku dhintay diyaaradaasi lix ruux oo Somali iyo Kenyan isugu jiray.
Warbixinta Amisom waxa ay ku cadeeyeen diyaaradaasi inay soo rideen Ciidamo Itoobiyaan ah oo aan ka tirsaneyn hawlgalka Amisom, waxaana Amisom ay sheegeen in Ciidankaasi ay ka shakiyeen jihada ay ka timid diyaaradaasi.
Qoraalka Amisom ayaa lagu sheegay Ciidamada ku sugan Garoonka Bardaale in aan lagu soo wargelin diyaaradda, sidoo kalana diyaaradda ay ka soo baxday jiho khaldan, Ciidankana ay uga shakiyeen diyaarad qarax wada oo rabta inay Garoonka bartilmaameedsato.
Si kastaha ha’ahaatee, ka sokow warbixinta Amisom ka soo baxday ilo wareedyo amni ayaa xaqiijinaya in Ciidamada Itoobiya si bareer ah diyaaradaasi u soo rideen, haddii aynaan wax digniino ah siinin.
Tags: AMISOM oo sheegtay, degmada Bardaale, gobolka Baay, inay itoobiya soo riday diyaaradii African Airways, shirkadda Diyaaradaha
Somaliland oo ku dhawaaqday xaalidihii ugu badnaa ee Coronavirus mar qura ay diiwaan-gelisay
DHAGEYSO: Xaafadda Islii ee Nairobi oo culeyskii laga qafiifiyay, kaddib markii…